Iko SEO Inokosha $ 100 Mamirioni? | Martech Zone
Iko SEO Inokosha $ 100 Mamirioni?
Chipiri, July 20, 2010 Svondo, October 30, 2011 Douglas Karr
Parizvino, handina chokwadi chekuti ndawana whitepaper yakadzama pakuyera kukosha kwekutsvagisa injini kusvikira ndaverenga iyi Whitepaper, Maitiro Ekukoshesa SEO. Kune mamwe masayiti akagadzira machena mapepa akafanana, asi ino inguva yekutanga kuona ini ndichitsanangurirwa mumwe munhu ane MBA kuti anzwisise zvizere.
Gwaro rinofamba chero muverengi, nekushandiswa kwespredishiti uye emahara maturusi anowanikwa kubva kuGoogle, kuongorora uye kuverenga kukosha kwekuverengerwa. Inosanganisirwa mune whitepaper ndeiyi:
Kukoshesa SEO seComp Analysis
Gore negore Kukosha kweYekutanga Peji Google chinzvimbo
Gore negore Kukosha kweYekutanga Peji Chinzvimbo Pakati Peese maInjini Ekutsvaga
Gore negore Kukosha kwerefu-Muswe Deresivative Nzvimbo
Kukoshesa Yakareba Temu Organic Rankings
Kuverenga Present Value Yekutanga Peji Maseru
Wakambozvibvunza here kuti kukosha kwegore rega kweiyo Peji rekutanga Google chinzvimbo ndechei kukwikwidza izwi senge Health Insurance? Makadii $7,471,194 kurira? Ndizvozvo chaizvo zvaizoda mari, zvakadaro, kubhidha uye kuhwina kushambadza kwakakwana kuti uwane nhamba yakafanana yekushanya pagore (840k pa $ 8.90 pakwenya). Iyo Makore mashanu Emakore Net Kukosha Kwazvino inofambisa iyo nhamba kusvika padhuze $100,000,000. (Iwe uchafanirwa kuverenga iyo whitepaper kuti unzwisise kuti nei ichi chiri chechokwadi kuongororwa).
Yako SEO inogona kunge isingakoshe zvakanyanya, asi inguva yekuti umire kufunga nezve yekutsvagisa injini seimwe mari yekushambadzira uye wotanga kutanga kuikoshesa sekudyara kunogona kutenderedza kambani yako - kunyanya mune ino hupfumi.
The inofungidzirwa kudyara yekambani kuwana peji rekutanga chinzvimbo che Health Insurance is $ 200,000 gore rekutanga uye $ 50,000 gore rega mushure mekuchengetedza chinzvimbo. Izvo zvakanaka kwazvo dzoka pakudyara uye chidimbu chemubhadharo wezvaizotora kuti uwane iwo iwo traffic mune yechinyakare midhiya.
Dhawunirodha iyo Whitepaper kubva kuSlingshot SEO.
Iyo Nyowani Yekupedzisira Chakavanzika Mashandisiro eTop 10 Gwara
Kuisa Kukwidziridzwa Pamoto neWildFire
Jul 21, 2010 pa 9: 57 AM
Chinhu chandinonyanya kufarira nezve SEO whitepaper ndechekuti kuenzanisa kwakananga kunoshandiswa iyo ingangoita imwe nzira - Adwords. Kwaunokwanisa kunyatso optimize yako Adwords mishandirapamwe, iwoyo mutengo unoenderera. Iri bepa rinoverengera iwo akanyura, kumusoro-yekushambadza madhora uye kana iyo payout ichave.
Iri bepa rinosimudzira kukosha kwasara kweiyo yepamusoro organic chinzvimbo, zvisinei bhizinesi richiri kufanira kufunga kuburikidza nenhamba yezvidimbu zvakawedzera pasi uye kuti zvinokanganisa sei iyo mari yekubhadhara mari;
% yevanopinda vanonyatso shandura mushure mekudzvanya
Hupenyu hwese kukosha kwemutengi iyeye
Ndeapi mazwi ane #1 chinzvimbo anozoguma nekutengesa
Ngatitii une yakanangidzirwa zvakanyanya, inomanikidza kukosha chirevo uye iwe unowana yakanakisa 35% yekutendeuka chiyero (inotungamira kune kutengesa) kana mushandisi angorova iro peji rekutora - Ikozvino iyo inoda kusvika $7.5 miriyoni kuongororwa kwemadhora 2.6 miriyoni panzvimbo.
Chinhu chikuru pamusoro peSlingshot SEO, uye chinopa mukukura kwavo kukuru, ndechekuti ivo vanozorasa vatengi kana iko kuororwa kweiyo organic zvinyorwa uye muripo unozobhadhara usingaite.